Rehefa nahazo traikefa: efa mandeha irery i Helyett | NewsMada
Rehefa nahazo traikefa: efa mandeha irery i Helyett
Niara-nihira tamin’i Clo Mahajanga, efa niara-niasa tamin’ny tarika Rira sy ry Samy Jao… Ireo no nahafantarana an’i Helyett hatramin’izay. Ankehitriny, tapa-kevitra ny handeha irery ny andriambavilanitra, izay monina any Frantsa any. Maromaro ny vokatra efa navoakany ary ao anatin’ny vinavina ny hampahafantatra izany amin’ny mpiray tanindrazana.
Vokatry ny fifaneraseran’i Helyett tamin’ny mpanakanto maro, azo lazaina ho efa mavesa-danja ny traikefa ananany eo amin’ny tontolon’ny hira sy mozika. Mirona kokoa amin’ny gadona mihetsiketsika, izay nitaizana azy sy nanefy ny talentany, tany Mahajanga tany, izy. Ankoatra izany, mahafehy karazana dihy maro i Helyett, satria efa mpandihy ny tenany teo aloha.
Ankoatra ny gadona, zava-dehibe kokoa ny fampitana hafatra ho an’ny rehetra, indrindra mahakasika ny tranga sy ny fiainana andavanandro, araka ny nambarany. Izy avokoa no mamorona ny tononkirany. Mikasika izay vokatra izay indrindra, nambaran’ity mpanakanto ity fa efa mahafeno rakikira iray ny hirany, raha atambatra, saingy tsy ny hamoaka izany rakikira izay aloha no mahamaika. Iaraha-mahalala, rahateo, ny afitsoky ny mpanao piraty, araka ny nambarany.
Mbola ao anatin’ny fampahafantarana ireo hirany aloha i Helyett, araka ny voalazany. Tafiditra ao anatin’izany ny hanatanterahana fampisehoana eto Madagasikara, atsy ho atsy, raha ny fampanantenany. Efa maro ny fety aman-danonana nafanainy tany Frantsa. Azo singanina amin’ireo sanganasany ny hoe «Ambila à côte» sy ny « Reviens-moi».